Ukuqaphela kwiphepha leKrismesi: ukhetho, ukutolika. Ukuvumelwa kweqiniso kwiphepha leKrisimesi yamantombazana
Ukuvumelwa kweqiniso kwiphepha leKrismesi kunye neKrisimesi
I-Krismesi yinto ekhethekileyo ngosuku lweKrismesi, xa kukho umlingo onokwenzeka. Ngokutsho kweenkolelo ezidumileyo, imithi yeKrisimesi ibhekwa njengexesha elifanelekileyo lokuqhuba imilingo. Ngethuba lokusukela ngomhla we-6 ukuya ku-19 kuJanuwari ukuba inkolelo inokuba yinyani. Uyakwazi ukuvula isigqubuthelo sekusasa: ukufumana ukuba unyaka omtsha uya kuzisa uvuyo nenhlanhla, ukubona i-sucheno-yazhenogo, ukuza kuzalisekisa umnqweno onqwenelayo. I-Fortune-Telling kwiphepha leKhisimusi yinto elula kwaye ethembekileyo ngokusekelwe kulwimi lweempawu kunye nenombolo. Ukuze ungakhohliswa ekulindelekeni, kufuneka uxoxwe ngetyala ngokusuka engqondweni, ukhuphe ngendlela engundoqo kwaye ukholelwe ummangaliso.
Ikhrisimesi ekuxeliweyo ephepheni ukuzalisekisa umnqweno:
Ukuqagela kwisithunzi. Thatha iphepha elimhlophe lephepha, usebenzise umququ, ubeke kwisitya, usibeke ngomlilo. Xa umlilo "ubamba" ininzi iphepha, cima ukukhanya kwaye ugcine inkqubo. Isithunzi siya kubonakala eludongeni ukusuka kwiphepha elivuthayo. Kubalulekile ukujonga ngokucophelela ukuba ungaphuthelwa nantoni na, kwaye usichaze ngokuchanekileyo oko ubonayo.
Ukuqagela kwiifom zephepha . Lungiselela amanqaku ephepha lobukhulu obufanayo, ubhale imibuzo / iinqwenela kubo, uwabeke kwisitya esikhulu, uthele amanzi kuwo. Amacwecwe aya kuqala aphendule, aze athambele phezulu. Umqhawulo wokuqala ovela emanzini uya kubonisa umbuzo onjani impendulo okanye oko kuza kwenzeka.
Ukugqitywa kwephepha . Thatha iphepha elincinane lephepha, bhala isifiso / umbuzo, uyibeke kwisitya ngaphandle kokuyichitha, uyibeke ngomlilo. Ukuba iphepha livutha ngokupheleleyo, umnqweno uya kuzaliseka ngokuqinisekileyo.
Ukuqagela ephepheni kwiKrismesi kumntu otshatileyo
Ngokwesiko, amantombazana aya kuchitha i-Christmas Christmas kunye neKrismesi ukubona indoda yabo ezayo kunye nokufumana indlela ubomi bentsapho obonwabile ngayo. Khetha:
Ukuqagela kookumkani . Ngaphambi kokulala, faka ookumkani abasi-4 kwidokethi yekhadi ngokulandelelana kwimifanekiso, phezulu: iziqonga, iiklabhu, iingcubha, iimbungu. Ngaphantsi kwamakhadi afihle ikhefu kunye nesibuko esincinane. Kubalulekile: Umgangatho wamakhadi kufuneka ube mtsha. Ngempumelelo ye-rite, omnye "ookumkani" uya kuhlala ephupheni. Kufuneka uzame ukukhumbula iimpahla kunye neendlela zobuso - oku kuya kunceda ukwazi uthando lwakho kwisihlwele. Iphupha lesiprofeto asinakuxelelwa kuye nawuphi na umntu, umntu ongowomthonyama othanda ngobubele ububele novuyo.
Ukuqagela ngegama . Lungiselela ama-7-10 amaphepha kwaye ubhale kuwo amagama angamadoda, faka ingxowa, xuba. Vala amehlo enu uze ubuze umbuzo othi: "Ndiyintetho, ndixelele, baya kukubiza ngantoni na?" Fumana elinye iqabunga uze ufunde igama leqabane elizayo.
Ukuqagela entliziyweni . Thatha iphepha elikwisityeli, udwebe intliziyo, phawula zonke iiseli ezisekukhaleni lwangaphakathi, iminqamlezo. Iiseli ezinqabileyo "isikwere". Inani leeseli ezingenakuqalwa, liza kuxela ngesimo sengqondo somntu omthandayo. Ukutolika:
bekungekho iiseli ezisele. Uthando lubuhlobo;
iiseli ezimbini. Ubuhlobo obomeleleyo;
enye. Ukuhlonipha nokuthanda;
iiseli ezihlanu. Ukungabi nandaba.
Ukuqaphela kwiphepha leKrismesi kuyindlela enhle yokuchitha ixesha elimnandi kwaye ufunde malunga nesiphelo sakho. Ngethuba leKrisimesi kunye nemigangatho engcwele, umntu kufuneka akhangele kwiziprofeto kuphela ngengqiqo kwaye akholelwe kwinhlanhla ekuza kuzisa uNyaka omtsha.
I-Slavonic i-fortune-telling: isangqa sikaSolomon
Izifo kunye nezidumbu zomzimba
Ziziphi iimpahla zasekhishini kufuneka umnikazi wekhitshi ngalinye abe nekhitshini
Umvuzo "I-Coral Reef"
Iklabishi kunye Nenkomo kwi-Multivariate
Luhlobo luni lwenkathalo olufunekayo ukuze udidi lwezinwele zakho?
I-Adyghe ushizi ekhaya kunye nezinto zayo zokugcina
Ziziphi iindlela ezifanelekileyo zokuzivocavoca?